၅ နှစ်​အရွယ်​ခ​လေး​တစ်​ဦး တောင်းစား​နေ​ခြင်း | J-Myanmar
၅ နှစ်​အရွယ်​ခ​လေး​တစ်​ဦး တောင်းစား​နေ​ခြင်း
ကျွန်တော် မြန်မာ​ပြည်​ကို ၁​၀ စု​နှစ်​တစ်​ခု​စာ ပြန်​မ​ရောက်​ခဲ့​တဲ့​အတွက် ပထမ​ဆုံး​အကြိမ်​ရောက်​တဲ့ အခိုက်​မှာ မြန်မာ​ပြည်​ရဲ့ ပြောင်းလဲ​မှု တော်တော်​များ⁠များ​ကို ကိုယ်​တွေ့ တွေ့​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ် ။
အဲ့​လို​ပြောင်​လဲ​နေ​တဲ့ အထဲ​မှာ​လည်း မ​ပြောင်းလဲ​ပဲ ဆိုး​ဆိုးဝါး​ဝါး ကျန်​ရှိ​နေ​တဲ့ အရာ​တစ်​ခု​ကို​လဲ ကျွန်တော် စိတ်​မ​သက်​မသာ​စွာ ဆိုး​ဆိုးဝါး​ဝါး ဆက်လက် တွေ့​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ် ။
အကြောင်း​က ခ​လေး​သူငယ်​တွေ​ကို အလုပ်​သမား​အဖြစ်​ခိုင်း​စေ​နေ​ခြင်း​နဲ့ တောင်းစား​စေ​ခြင်း​ဆို​တဲ့ ရန်ကုန်မြို့​ရဲ့ အကျည်းတန်​ဆုံး မြင်​ကွင်း​ကို ခြေ​ဖျက်​ဖို့ ကျွန်တော် ဒီ​နေ့ သူငယ်​အားလုံး​ကို လေးစား အားကိုး​ပြီး မြန်မာ​ပြည်​မှာ အရွယ်​မ​ရောက်​သေး​တဲ့ ခ​လေး​သူငယ်​တွေ​ကို နာရီ​များ​စွာ ခိုင်း​စေ​ခြင်း​နဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​တစ်​ခု နဲ့ တောင်းစား ခိုင်း​နေ​တဲ့ ဖြစ်​ရပ်​တွေ​ကို ဘယ်​လို ရပ်တန့်​ပစ်​မ​လဲဆို​တဲ့ မေးခွန်း​ကို ကျွန်တော့်​စာ​မျက်နှာ​က စတင်​ဆွေးနွေး​ပါ့​မယ်။
ကျွန်တော် ပြည်​ပ​မှာ​နေ​တုန်း​က မြန်မာ​ပြည်​က NGO တွေ UN အဖွဲ့​အစည်း​တွေ ၊ နိုင်ငံ​တကာ လူ​အခွင့်အရေး အဖွဲ့​အစည်း​တွေ ၊ ဘာသာ​ရေး​အဖွဲ့​အစည်း​တွေ​နဲ့ တိုင်း​ရင်း​သား အဖွဲ့​အစည်း​တွေ​ရဲ့ ဟစ်ကြွေး​နေ​တဲ့​အသံ​တွေ​ကို နား​နဲ့​မ​ဆံ​အောင်​ကြား​နေ​ခဲ့​ဘူး​ပါ​တယ် ။ လူ့​အခွင့်အရေး ချိုး​ဖောက်​ခြင်း ဆို​တဲ့ စကားလုံး​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ် ။
ခု ပြန်​ရောက်​တော့ တွေ့​ရ​တာ​က မြန်မာ​ပြည်​ရဲ့ ရေပန်း​အစား​ဆုံး စီးပွား​ရေး တစ်​ခု​ဖြစ်​တဲ့ လက္ဘက်​ရည်​ဆိုင်​တွေ​မှာ ခ​လေး​တွေ​ကို တစ်​ရက် ၁​၀ နာ​ရီကျော် ခိုင်း​စေ​နေ​တဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ၅ နှစ်​မ​ပြည့်​သေူ​တဲ့ ခ​လေး​က​နေ ၁​၄ နှစ် အရွယ်​အထိ ကို အုပ်စု​လိုက်​ရော တစ်​ယောက်​ခြင်း​ရော ရန်ကုန်​မှာ တောင်းစား​နေ​စေ​တဲ့ ကိစ္စ​တွေ​ကို နေရာ​တိုင်း​မှာ​တွေ့​နေ​ရ​တဲ့ အခါ ကျွန်တော့်​စိတ်​ထဲ​မှာ ငယ်ရွယ်​တဲ့ ခ​လေး​ဘဝ​ကို မ​တရား စွာ​ဖြတ်​သန်း​နေ​ရ​တဲ့ ရန်ကုန်မြို့​ပြ​ကြီး​ထဲ​က ထို​ခ​လေး​တွေ​အတွက် ဘယ်​လို​လူ​မျိုး​တွေ​က တရား​မျှတ​စွာ ရပ်​တည်​ရင်ဆိုင်​ပေး​မ​လဲဆို​တာ​ကို ကျွန်တော် မေးခွန်းထုတ်​စရာ​ဖြစ်လာ​ပါ​တယ် ။
ပထမ​ဆုံး မျက်​မြင်​တွေ့​ရ​တဲ့ အရာ​က ရေကျော်​က လဘ္ဘက်​ရည်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်ပိတ်​ခါ​နီး ၁​၀ နှစ်​သား​လောက် ခ​လေး​တစ်​ဦး အမှိုက်​သွား​ပစ်​နေ​တာ​ကို ကျွန်တော် တွေ့​မြင်​ရ​ခြင်း​ပါ ။
အမှုက်​ပုံး​က ၃ ပေ​လောက်​မြင့်​ပါ​တယ် ခ​လေး​အရပ်​က ၄​ပေ သာသာ ၅ ပေ​မ​ပြည့်​သေး​ပါ ။ ထို​ခ​လေး​က အမှိုက်​ပုံး ကို မ​သယ်​သွား​ဖို့ ကြိုးစား​မ​ပါ​တယ် ။ အမှိုက်​ပုံး ကလေး​တော့ ကြွ​တက်မ​လာ​ခဲ့ . နောက်​တော့ ခ​လေး​က မ​ရ​တဲ့​အဆုံး အဲ့ အမှိုက်​ပုံး​ကြီး​ကို ကျောပေါ်​မှေး​တင်​ပြီး အမှိုက်​ပုံ​ကို တ​ရွတ်​တိုက်​ဆွဲ​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ် .. ။ ဒီ​မြင်​ကွင်း​မှ ကျွန်တော့်​သူငယ်ချင်း​တွေ​က အဲ့ ၁​၀ နှစ်​သား အရွယ်​ခ​လေး​တစ်​ဦး​က အလုပ်​ကြိုးစား​နေ​တာ​ကို အားပေး​ချင်​အားပေး နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ် ။ သို့သော် ဒီ​အရွယ်​ဟာ ကျွန်တော်​တို့​တိုင်း​ပြည်​အနာဂတ်​အတွက် ပညာသင်​နေ​ရ​မယ့် ခ​လေး​အရွယ်​တွေ​ဆို​တာ​ကို တော့ မ​ငြင်း​ကြ​ပါ​နဲ့​ဗျာ .. ။ ဒါ​က အရွယ်​မ​ရောက်​သေး​တဲ့ ခ​လေး​သူငယ်​တွေ​ရဲ့ အနာဂတ်​ကို ရိုက်​ချိုး​နေ​တာ​လို့​လဲ သဘောပေါက်​စေ​ချင်​ပါ​တယ် ။
ကျွန်တော် တို့​တိုင်း​ပြည်​က ခ​လေး​တွေ​အတွက် အခြေ​ခံ​ပညာ ကို​တောင် စည်းကမ်း​တ​ကျ သင်​မ​ပေး​နိုင်​ခဲ့​ရင် တစ်​ချိန် ကျွန်တော်​တို့ မြန်မာ​ပြည်​က အနာဂတ်​မလှ​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​တစ်​ပြည် ဖြစ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ် ။ ဆိုလို​တာ​က နိုင်ငံ​ခြား သား လုပ်​ငန်း​ရှင်​တွေ သာ တိုးတိုး​လာ​ပြီး တိုင်း​ရင်သား သန္ဒေ လူ​မျိုး​တွေ​အတွက် အနာဂတ် မှေး​မှိန်​သွား​နိုင်​ပါ​တယ် .. ။ ပညာ​မတတ်​သည်​ထား​ဦး အခြား​အသက်မွေး ဝမ်း​ကျောင်း​ပညာ​ကျ​ပြန်​တော့​လည်း မြန်မာ​ပြည်​မှာ ကွမ်း​ယာ​ရောင်း​စား​ခြင်း ၊ ဆိုက်​ကား​နင်း​ခြင်း ၊ စ​ပါယ်​ရာ​လိုက်​ခြင်း ၊ ဈေးရောင်း​ခြင်း ၊ နဲ့​ပွဲစား​အလုပ်​တွေ​က​သာ လက်​ရှိ ဝမ်း​ရေး​ပြဿနာ​ကို ဖြေ​ရှင်း​ပေး​နေ​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် .. ။
ဆိုလို​တာ​က လူ​ဦးရေ​နဲ့ ညီမျှ​တဲ့ အသက်မွေး​ဝမ်း​ကျောင်း​ပညာ သင်​နိုင်​ခွင့်​မ​ရှိ​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​တစ်​ပြည်​ဖြစ်လာ​နေ​တယ်​လို့ ကျွန်တော် မီး​မောင်း​ထိုး​ပြ​နေ​တာ​ပါ​ပဲ ..။
မြန်မာ​ပြည်​မှာ မြေကွက်​တစ်​ကွက်​ကို သိန်း ထောင်​ချီ​ပေး​နေရာ​တွေ နား​နဲ့​မ​ဆန့်​အောင် ကြား​နေ​ရ​ပါ​တယ် ။ ဝယ်​တဲ့​သူ​တွေ​က​လည်း နေ​ဖို့​မဟုတ်​ပဲ အမြတ်​ရအောင် လိုက်​ဝယ်​နေ​တာ​ကို တွေ့​မြင်​နိုင်​ပါ​တယ် ။ ဘာ​ေၾ္ကာင့် သူ​တို့​ဒီ​မြေ​တွေ အိမ်​တွေ​ကို တ​ကယ့်​တန်ဖိုး​ထက် အဆ​ပေါင်း​များ​စွာ​ပေး​ဝယ်​နေ​သလဲ အဖြေ​ကို တွေး​ကြည့်​ရင် တခြား​လုပ်ကိုင်​စား​သောက်​ဖို့ အသပ်​မွေး​ဝမ်း​ကြောင်း​ပညာ​မတတ်​ကျွမ်း​မှု ၊ လတ်​တ​လော အခက်​အခဲ​ကို ဖြေ​ရှင်း​နိုင်​အောင် ကြိုးပန်း​မှု​နဲ့ အနာဂတ်​ကို မ​စဉ်းစား​မှု​တို့​ကြောင့် မြန်မာ​ပြည်​မှာ အိမ်​ခြံ​မြေ​ဈေး​က အရှေ့တောင်​အာ​ရှ သာ​မက ကမ္ဘာပေါ်​မှာ ဒူ​ဘိုင်း​ပြီး​ရင် ဒုတိယ အဈေး​အကြီး​ဆုံး န်ိုင်​ငံ​ဖြစ်လာ​နိုင်​ပါ​တယ် ။ ဒီ​လို​ဆို ကျွန်တော်​တို့ အနာဂတ် တိုင်း​ပြည်​ဖွံ့ဖြိုး​မှု​က အိမ်​ခြံ​မြေ ပွဲစား​တွေ​လက်​ထဲ​မှာ ရှိ​နေ​တယ်​လို့ အတိ​အကျ သဘောရ​ပါ​လိမ့်​မယ် ။ တိုင်း​ပြည်​အနာဂတ်​အတွက် အလွန်​အန္တ​ရယ်​ကြီး​နေ​တဲ့ အချိန်​လို့ ယူဆ​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ် ။
ဆက်​ပြီး နောက်​ကိစ္စ​တစ်​ခု​က အသက်​မ​ပြည့်​သေး​တဲ့ ခ​လေး​သူငယ် တွေ​ကို တောင်းစား​ခိုင်း​နေ​တာ​ကို သူငယ်ချင်း​တွေ​သိ​အောင် ရေးသား​ဖို့​ပါ ။ ခ​လေး​တွ​ကို ပြည်​သူ​လူထု​က သနား​လို့ ပိုက်ဆံ ထည့်​နေ​မယ် ၊ မြန်မာ​တွေ​ရဲ့ သနား​တတ်​တဲ့ စိတ်​နဲ့ နားလည်​ပေး​နေ​မယ်​ဆို သက်ဆိုင်​ရာ​က မ​သက်ဆိုင်​ရာ လို ထိုင်​ကြည့်​နေ​မယ်​ဆို ကျွန်တော်​တို့ တိုင်း​ပြည်​အနာဂတ်​က ပျောက်​ကွယ်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် ၊ မဟုတ်​ရင်​လဲ နိမ့်​ပါး​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် ။
၁​၉ လမ်း​ထဲ​ကို ကျွန်တော်​တို့ အကင်​စား​ဖို့​နဲ့ ဘီ​ယာ​သောက်​ဖို့​သွား​ကြ​တော့ ည​ဘက် တရုတ်တန်း ၁​၉ လမ်း ရဲ့​ကျမ်း​ပြင်​ဟာ ကွန်​က​ရစ်ပေါ် ဗွက်​ထ​ပြီး အတော့်​ကို ္​ညစ်​တီး​ညစ်ပတ် နိုင်​ပါ​တယ် . ။ ဒီ​လို မြန်မာ​ပြည်​ရဲ့ နိုင်ငံ​ခြား​သား ၊ ခရီးသွား​ဧည့်သည်​တွေ ဝင်​တဲ့ လမ်း​ကို စ​တစ်​တ​ကျ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်​ဖို့ ဟော်​တယ်​နဲ့​ခရီးသွား ဝန်ကြီး​ဌာန​က အရာရှိ​တွေ စဉ်းစား​မိ​ပုံ​မပေါ်​ဘူး​လို့​လဲ ထင်မြင်​မိ​ပါ​တယ် .. ။
ကျွန်တော်​တို့ ဘီ​ယာ​သောက်​နေ​တဲ့ ဝိုင်း​ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၄ ဝိုင်း​လုံး​က န်ိုင်​ငံ​ခြား​သား​တွေ​ချည်း​ဖြစ်​ပါ​တယ် ..။ အဲ့​အချိန်​မှာ စ​ပါယ်​ပန်း နဲ့ ဇွန်​ပန်း​ရောင်း​တဲ့ အသက် ၃​၀ ခန့်​ဆရာ​သမား​တစ်​ယောက်​က အော်ဟစ်​ပြီး ပန်း​လာ​ရောင်း​ပါ​တယ် .. ။
ပန်း​ရောင်း​ပုံ​က​လဲ ကြည့်ပါ .. န်ိုင်​ငံ​ခြား​သား နှာခေါင်း ကို ထိ​တဲ့​အထိ ပန်း​ကို မျက်နှာ​နား​ထိုး​ထည့်​ပြီး​မှ ပန်း​ဝယ်​မ​လား ဆို​ပြီးအော်​ပါ​တယ် .. ။ နိုင်ငံ​ခြား​သား အမျိုးသမီး​တစ်​ယောက်​က ခါး⁠ခါး​သီး​သီး လက်ကာ ထုတ်​ပြီး င်ြ​နေ​ရ​တာ​ကို တွေ့​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ် ။
ကျွန်တော်​တို့ တိုင်း​ပြည်​ရဲ့ ရှေ့​ရေး​အတွက် လွတ်တော်​မှာ အမတ်​လုပ်​နေ​တဲ့ အမတ်​တွေ​ကို ခဏ​လောက်​စကားပြော​ကြည့်​ချင်​ပါ​တယ် .. ။ နိုင်​ငံတော်​ရဲ့ မျက်နှာစာ က ဘာ​တွေ​လဲ .. ၊ နိုင်​ငံတော်​ရဲ့ အနာဂတ်​က ဘာ​တွေ​လဲ .. ၊ န်ိုင်​ငံတော်​အတွက် ချ​မှတ်ထား​တဲ့ လမ်း​စဉ်​တွေ​က ဆိုင်း​ဘုတ်​တွေ​လား ၊ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေ ဆို​တာ စား​ပွဲပေါ်​ထိုင် လက်မှတ်ထိုး အောက်​လက်​ငယ်သား​တွေ ပြော​တာ နားထောင်​ပြီး ပုဆိုး​ပြင်​ဝတ် ရုံးဆင်း​သွား​တဲ့ အစိုးရ​ရုံး​တွေ​လား ။
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး​ဌာန​ရဲ့ အင်အား​အကြီး​မား​ဆုံး​ဖြစ်​တဲ့ တာဝန်ရှိ​သူ ရဲ​တွေ​က ယူ​နီ​ဖောင်း​အစုတ်​ကို ခါး​ပတ် အပြုတ်​နဲ့​ဝတ်​ပြီး စက်ဘီး​စုတ်​နဲ့ လိုက်​တာဝန်​ထမ်း​နေ​ရ​တာ​ကို မ​မြင်​တာ​လား .. ၊ မာ​ဖီ​နဲ့ ရဲ​ကား​မောင်း​နေ​တဲ့ သူ​တွေ​ကို တာဝန်​ယူ​ဖို့​ပျက်ကွက်​နေ​တာ​လား​ဆို​တာ မေး​ကို သွား​မေး​ရ​ပါ​တော့​မယ်. .. ။ တိုင်း​ပြည်​က အာဏာပိုင်​အဖွဲ့​အစည်း​ရဲ့ တာဝန်​တွေ​ကို လေးစား​သ​မှု​နဲ့ ကျေပွန်​ဖို့ ကျွန်တော် အသိ​ပေး​ခြင်​တာ​ပါ .. ။
နောက်ဆုံး အဆိုး​ဆုံး​တစ်​ခု​က ကျွန်တော်​တို့​သောက်​နေ​တဲ့ ဝိုင်း​ကို ၅ နှစ်​လောက်​ရှိ​တဲ့ ခ​လေး​မ​လေး မုန့်​ဖိုး​ပေး​ပါ​လား ဆို​ပြီး ပိုက်ဆံ​လာ​တောင်း​တာ​ပါ​ပဲ …။ မိဘ​တွေ​ကို သိ​တဲ့​သူ​ရှိ​ရင် ပြော​ပါ ..။ ကျွန်တော် ခ​လေး​မ​လေး​ရဲ့ အနာဂတ်​ကို မ​ထိခိုက်​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး .. ။ ဒါ​ပေ​မယ့် တာဝန်ရှိ​တဲ့​သူ​အားလုံး ၊ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း​အားလုံး သိ​အောင့် ခ​လေး​မ​လေး​ရဲ့ ပုံ​ကို တင်​ပါ​တယ် ။ ကာယကံ​ရှင်​ရဲ့ ခွင့်​ပြု​ချက်မ​ယူထား​ပါ​ဘူး.. အကြောင်း​က မ​တရားမှု​ကို ဖော်​ထုတ်​တယ်​လို့ ယူဆ​လို့​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ် … ။
ကျွန်တော့် တို့ မြန်မာ​ပြည်​ရဲ့ နာ​မည်ကျော် ၁​၉ လမ်း​ထဲ ဘီ​ယာ​သောက်​နေ​တဲ့ နိုင်ငံ​ခြား​သား​တွေ​ထဲ​မှာ အသက် ၅ နှစ်​ရှိ​သေး​တဲ့ ခ​လေး​တစ်​ယောက် တောင်းစား​နေ​တာ​ကို တွေ့​ရ​တော့ ကျွန်တော် ဘယ်​သူ့​ကို အပစ်​တင်​ရ​မ​လဲဆို​တာ မ​စဉ်းစား​တတ်​အောင်​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ် ။
အထင်​သေး​စွာ ၊ သနား​ခြင်း​ကြီး​စွား နဲ့ ခေါင်း​တ​ရမ်း​ရမ်း လှုပ်​နေ​တဲ့ နိုင်ငံ​ခြား​သား​တွေ​ကို ကျွန်တော် မြန်မာ​နိုင်ငံသား တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့ ရှက်​ရွံ့​မျက်နှာ​ပူ​ပါ​တယ် .. ။
အလိုက်​မ​သိ​တဲ့ တာဝန်ရှိ​သူ​တွေ​ကိုယ်စား ဘီ​ယာ​သောက်​နေ​မိ​တဲ့ ကျွန်တော်​က အပစ်​ကျူးလွန်​နေ​သ​လို​ခံစား​ရ​ပါ​တယ် .. ။
နေပြည်တော်​က လွတ်တော်​မှာ တိုက်​ပုံ​အကျီ​ဝတ်​ပြီး ခန့်⁠ခန့်​ကြီး​ထိုင်​နေ​တဲ့ လွတ်တော်​အမတ်​တွေ​ကို မျက်မှန် ကြီး⁠ကြီး​တပ်​ပြီး ပြည်​သူ​လူထု​ရဲ့ အနာဂတ်​အတွက် စဉ်းစား​ပေး​ကြ​ဖို့ နဲ့ ည ဒီ​အဖြစ်​တွေ​က​မျက်နှာ​လွဲ ခဲ​ပစ်ထား​ရ​မယ့် ကိစ္စ​တွေ မဟုတ်​ဘူး​ဆို​တာ အသိ​ပေး​လို​ပါ​တယ် . ။
နိုင်ငံ​တကာ​ရဲ့ ကျွန်တော်​တို့ မြန်မာ​ပြည်ပေါ်​မြင်​နေ​တဲ့ အမြင်​တွေ​ကို ခြေ​ဖျက်​ပစ်​ဖို့ ကျွန်တော်​တို့ အားလုံး​မှာ တာဝန်ရှိ​ပါ​တယ် .. ။ ဒါ​တွေ​က​သာ လူ့​အခွင့်အရေး​ကို ချိုး​ဖောက်​နေ​ရုံ​မက ရေ​ကုန်​မီး​ကုန် စော်ကား​နေ​တယ်​လို့ အဓိပ္ပါယ်​သက်ရောက်​ကြောင်း မြန်မာ​ပြည်​က တာဝန်ရှိ​သူ​တွေ​ကို မီး​မောင်း​ထိုး​ပြ​ပါ တယ် .. ။ ဒါ​က တိုင်း​ရင်း​သား​တိုင်း ဘာသာ​တိုင်း နိုင်ငံသား​တိုင်း​ရဲ့​တာဝန် ဆို​တာ​ကို အားလုံး သိ​စေ​ချင်​ပါ​တယ် .. ။
နိုင်ငံ​တကာ​ကို မြန်မာ​လို့ စိတ်လက်​ပေါ့ပါး​စွာ သွား​လည်​ချင်​ရင် … မြန်မာ​အစိုးရ​လို့ ရင်​ကော့ ခေါင်း​မော့​လမ်းလျှောက်​ခြင်​ရင် ဒီ​အရာ​တွေ​ဟာ မ​ဖြစ်​မ​နေ ဆောင်ရွက်​ရ​မယ့် အရာ​တွေ​ပါ​ဗျာ ။
သားသမီး​ကို မိဘ​က​ပိုင်​လို့ အသက်အရွယ်​မ​ပြည့်​သေး​ပဲ တောင်းစား​ခိုင်း​တာ​ဟာ ပစ်​မှု ကျူးလွန်​ရာ​ရောက်​တယ်​ဆို​တာ​ကို မိဘ​တွေ သိ​အောင် ထိ⁠ထိ​ရောက်⁠ရောက်​ကိုင်တွယ် ပညာ​ပေး​သင့်​ပါ​တယ် . ။ ဒီ​ကလေး​တွေ​ဟာ ကျွန်တော်​တို့​တိုင်း​ပြည်​ရဲ့ အနာဂတ် စစ်စစ်​ပါ .. နောင်​တစ်​ချိန် ကျွန်တော်​တို့ အသက်ကြီး​ရင် အားကိုး​ရ​မယ့် အနာဂတ် မျိုး​ဆက်​သစ်​တွေ​ပါ ခင်ဗျာ .. ။ စောင့်​ရှောက့်​ပေး​ကြ​ပါ .. ။
ကျွန်တော့်​သူငယ်ချင်း​တွေ​ထဲ​မှာ မြန်မာ​ပြည်​က​ခ​လေး​တွေ​အတွက် စာ​သက်​ကျောင်း​ဆောက်​ပေး​နိုင်​တဲ့ သူ​ရှိ​မယ်​ဆို​ရင်တောင် တိုင်း​ပြည်​မှာ ဖြစ်​ပျက်​နေ​တဲ့ အခြေအနေ အရ မှီ​နိုင်​မယ်​မ​ထင်​ဘူး​လို့​ယူဆ​ပါ​တယ် ။
သို့သော် ကျွန်တော်​တို့​မှာ လုပ်​နိုင်​တာ​တစ်​ခု​တော့ ရှိ​နေ​ပါ​တယ် .. အဲ့​တာ ဘာ​ဖြစ်​မ​လဲဆို​တာ ကျွန်တော့်​ကို ရေးသား​ပေး​ကြ​ပါ​လား​ခင်ဗျာ ….. ။
Next post ဂျပန်​လွှတ်​တော်​မှာ မြန်​မာ့​အရေး​တင်ပြ
Previous post မင်​နီ​ပါ​ကွိုက် လို ပြန်​အလုပ်​အကျွေး​ပြု​ရအောင်